Garab duub duub baraf
Duub duub baraf
Baakad baraf leh suunka
bac baraf caafimaad
Xirmada barafka baabasiirka
xirmo jel kulul iyo qabow
Xirmooyinka Dhaawaca Isboortiga ee Dhaawaca Isboortiga
GEL ICE SVEEVE
Bacda qaboojiyaha khamriga
Hooyo iyo xirmooyinka barafka ilmaha
Jelku wuxuu hayaa qaabkiisa, ma maqashaa taas?
Gacan-barafka jel ee la isku-duubay waa nooc jel ah oo gaar ah oo adag oo haddana jilicsan. In kasta oo jello kale ay biyo yihiin, jelkeenna adag ayaa si raaxo leh ugu dhaawacaya dhaawacaaga oo kama dhaqaaqi doono marka cadaadis la saaro. Jel biyo-biyoodku si fiican uma daboolaan aagga dhaawacan, iyagoo qulqulaya marka xitaa waxyar ...
Daaweynta dabiiciga ah ee dhanjafka leh koofiyada barafka
Dadka badankood waxay yeeshaan madax xanuun mar mar, laakiin qof kastaa ma yeesho madax xanuun isku mid ah dadka qaarna waxaa ku dhaca in ka badan hal nooc oo madax xanuun ah. Madax xanuunka dhanjafku waa nooc madax xanuun gaar ah oo keena calaamado kale oo ay weheliyaan madax xanuun. Sideed ku ogtahay inaad heshay dhanjafka, wax farqi ah ...
Sida loo yareeyo cilladda tunnel tunnel syndrome
habka dabiiciga ah? Cudurka loo yaqaan 'Carpal tunnel Syndrome' C "CTS" common waa xaalad caadi ah oo keenta xanuun, kabuubyo, iyo xoqidda gacanta iyo gacanta sida caadiga ah waxay ku dhacdaa dadka waaweyn gaar ahaan hooyada qaarkood oo gacanta ku haysa ilmaha habeenkii oo dhan dadka qaarna waxay ka shaqeeyaan soo saarista, tolitaanka, dhammeynta , nadiifinta iyo ...
Sida loola tacaalo fasciitis plantar
Plantar fasciitis waa cudur aad u caabuq badan. Bukaanku ma awoodi doonaan inay si caadi ah u socdaan sababtoo ah cidhib xanuun. Xaaladani waa mid aad u muuqata marka laga soo kaco sariirta subaxa hore, laakiin astaamaha ayaa lafiicinaya kadib socodka mudo ah. Si kastaba ha noqotee, xanuunka ayaa dib u soo muuqan doona haddii ...
Expo News Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. waa shirkad had iyo jeer dibedda u baxdo si ay suuqa u aragto ugana soo qayb gasho bandhigyada baakadka qabow ee kala duwan, waxaan rajeyneynaa in aan baarno dalabkii ugu dambeeyay ee macaamiisha ee ku saabsan xirmooyinka barafka, ka dibna waxaan horumarin karnaa ...
Xeerka Bariiska Daaweynta Bariiska waxaa kula taliyay xirfadleyda caafimaadka daaweynta hore ee dhaawaca lafaha ama dhaawacyada unugyada jilicsan sida murgacasho ama culeys Waxay caawin kartaa dhaawacyada isboortiga, jabka xiran, iyo ...
Daryeelka umusha kadib
Daryeelka umusha ka dib Uurka, foosha iyo dhalmada waxaa lagu buuxin karaa dareemo sixir ah; barashada ilmahaaga adduunka iyo markay dhashababa run ahaantii waxay haysaa qaar ka mid ah xusuusta ugu gaarka ah ee aad ugu dhowaan doontid ...
Sidee loola macaamilaa soo saarista iligga
Sida loola macaamilo soo saarista ilkaha Nidaamyo badan oo soo saarista iligga ah, gaar ahaan ka dib ilkaha xigmadda ama qanjidhada la yaab leh, dhakhaatiirtu waxay si isdaba joog ah u xoojin doonaan codsiga qabowga (barafka) si loo yareeyo bararka qalliinka ka dib, iyo sidoo kale ...